ဦးဆောင်ပြင်ပတွင်အလင်းအိမ် > ဦးဆောင် illumination > Product-List
တရုတ် 3W Led downlight recessed တရုတ် 5w Led downlight recessed တရုတ် 7w Led downlight recessed တရုတ် 9W Led downlight recessed
တရုတ် 12w Led downlight recessed တရုတ် 15w Led downlight recessed တရုတ် 18w Led downlight recessed တရုတ် 10w မျက်နှာပြင် downlight ဦးဆောင်ပြီး
တရုတ် 18w မျက်နှာပြင် downlight ဦးဆောင်ပြီး တရုတ် 30w မျက်နှာပြင် downlight ဦးဆောင်ပြီး 7w ဆင်နှာမောင်း Led downlight recessed 15w ဆင်နှာမောင်း Led downlight recessed
25w ဆင်နှာမောင်း Led downlight recessed 35w ဆင်နှာမောင်း Led downlight recessed 50w ဆင်နှာမောင်း Led downlight recessed
1. 3W 5w 7w 9W 12w 15w 18w 24w LED ကို downlight recessed
2. 10w 18w 30w မျက်နှာပြင်ကို LED downlight
3. 7w 15w 25w 35w 50w ဆင်နှာမောင်းနဲ့ LED downlight recessed
3W 5w 7w 9W 12w 15w 18w 24w LED ကို downlight recessed. ( 3W 5w 7w 9W 12w 15w 18w 24w LED ကို downlight recessed )
3W 5w 7w 9W 12w 15w 18w 24w LED ကို downlight recessed
တရုတ်နိုင်ငံ ဦးဆောင် illumination တင်ပို့သူ
အဘို့အရင်းမြစ် ဦးဆောင် illumination Guzhen မြို့, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်မှာထုတ်လုပ်သူ
တစ်ထုတ်လုပ်သူ ဦးဆောင် illumination Guzhen မြို့, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်ထံမှ
တစ်ထုတ်လုပ်သူ ဦးဆောင် illumination ဂွမ်ဒေါင်းတရုတ်မှာ။
အဆိုပါ featured တရုတ်ဂွမ်ဒေါင်း ဦးဆောင် illumination ဤနေရာတွင်စာရင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် karnar အလင်းရောင်အားဖြင့်ရင်းမြစ်ထားတဲ့နေကြသည်။
ဤအုပ်စုတို့ပါဝင်သည်: ဦးဆောင် illumination
အဘို့အရင်းမြစ် ဦးဆောင် illumination
အဘို့အကုန်ပစ္စည်းများ ဦးဆောင် illumination
တရုတ်နိုင်ငံ ဦးဆောင် illumination လက္ကား
ZhongShan ဦးဆောင် illumination တင်ပို့သူ
ZhongShan ဦးဆောင် illumination လက္ကား
ZhongShan ဦးဆောင် illumination ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED
ဂွမ်ဒေါင်း ဦးဆောင် illumination ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED
Guzheng မြို့ ဦးဆောင် illumination ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED